Nutrition – Page 14 – Healthy Life Journal
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေကဒိန်ချဉ် ပိုစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ အမျိုးသမီး ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းက ဒိန်ချဉ်စားနေကြပြီး အမျိုးသား ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းကသာ စားလေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၂) ဒိန်ချဉ်စားရင်...
ဗီတာမင်ဒီရရှိစေမယ့် အစာ . . .
မေး။ ။ ဗီတာမင်ဒီကို နေရောင်ခြည်ကရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဘွားက အပြင်သိပ်မထွက်လို့ ဗီတာမင် ဒီရအောင် ဘယ်လို ကျွေးသင့်ပါသလဲ။ မယ်ထွေး၊ တောင်ကြီး။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလည်း မနက်ခင်းမှာ...
strong>အနီရောင် အနီရောင်အစာက နှလုံးကျန်းမာပြီး သွေးကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အနီရောင် အစာတွေက စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ပန်းသီးစတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင် လိမ္မော်ရောင်အစာက ဗီတာမင်စီပါဝင်မှုများပြီး ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင်အစာတွေက လိမ္မော်သီး၊ မုန်လာဥနီ စတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဝါရောင် အဝါရောင်အစာက...
ကလေးဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ချိန် ကျွေးသင့်သော အစာ . . .
မေး။ ။ ကျွန်မကလေးက အသက် နှစ်နှစ်ပါ။ ကလေး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ခဏခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ချိန်မှာ ဘယ်လိုအစား အသောက်တွေကို ကျွေးသင့်ပါသလဲရှင့်။ လွင်လွင်အေး၊ ဒေါပုံ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူအတွက် သီးသန့်အစားအသောက်ရယ်လို့ မရှိပေမယ့် ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အစားအသောက်တချို့နဲ့ မတည့်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားရမယ့်အစာ၊ ရှောင်ရမယ့်အစာဆိုတာ ရှိလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံရှိဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတို့ စားသင့်သည့်အစားအသောက်များ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတွေ အဓိကစားသင့်တာက ဗီတာမင်စီ၊...
ဖရဲသီးစားသင့်သည့် အစွမ်းထက် အကြောင်းပြချက် ၁၆ ခု
၊ လရိပ်မေ ၊ (၁) ဖရဲသီးစားတာကြောင့် သွေးတိုးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၂) ဖရဲသီးစားတဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အဆီကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ (၃) ဖရဲသီးစားတာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာစေပါတယ်။ (၄) ဖရဲသီးစားတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆိပ်ပြယ်စေပါတယ်။ (၅) ဖရဲသီးက...
ဒူးရင်းသီး စားသင့်သလား . . .
၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် ၊ (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဒူးရင်းသီးက အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ဒူးရင်းသီးမှာ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှု များပါတယ်။ အရွယ်တော် ဒူးရင်းသီးတစ်လုံးမှာ ၆၀ဝ ဂရမ်လောက်လေးပြီး ၈၈၅ ကယ်လိုရီပါဝင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် ပိန်တဲ့သူတွေ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကလေးမွေးပြီးချိန် စားသင့်၊ မစားသင့်သည့် အစာအာဟာရ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကလေးမွေးပြီးစ မိခင်တွေအနေနဲ့ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ ကိုယ်ဘာစားသင့်ပြီး ဘာကိုရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာ သိနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ စားသင့်သည့် အစာအာဟာရ – ရေ ရေ၊ စွပ်ပြုတ်နဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေကို များများသောက်ပေးပါ။ – အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက...
ကောင်းသော အဆီ ပါဝင်မှုများသည့် အစာများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အဆီဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါပြီး စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆဲလ်ဖြစ်ပေါ်မှု၊ အောက်ဆီဂျင် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ သွေးခဲမှု စတာတွေမှာ ပါဝင်ကူညီပေးပါတယ်။ တချို့အဆီ၊ ဥပမာ အပင်ကရတဲ့ မပြည့်ဝဆီတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပေမယ့် တိရစ္ဆာန်ထွက်အစာတွေကရတဲ့ ပြည့်ဝဆီတွေက...